Womenmụ nwanyị nọ na Hindu Shakta Tantra - WRSP
Womenmụ nwanyị nọ na Hindu Shakta Tantra
OMMOMAKA N’ANYA HINDU SHAKTA TANTRA
Afọ nke isii ruo nke asaa Ce: Ihe odide mbụ nke Hindu Shakta tantric bụ nke e dere na India.
Afọ nke iri na nke iri na anọ: Tantra ji nwayọọ nwayọọ ghọọ onye a ma ama na India, na-enwewanye ederede ọzọ.
Narị afọ nke iri na isii gaa n'ihu: Hindu Shakta Tantra ji nwayọ jụ na narị afọ nke iri na isii, na ịrị elu nke okpukpe ofufe (bhakti), ọ bụ ezie na edere ụfọdụ tantras kemgbe oge ahụ.
Narị afọ nke iri abụọ: formsdị ọhụrụ nke Hindu Shakta Tantra malitere, nke Rajneesh nwere mmetụta (1931-1990), nke a mechara mara dị ka Bhagwan Shri Rajneesh na Osho, onye kụziri ụdị mmekọrịta Hindu Tantra ma malite ịdọta ndị na-efe ofufe na India na West. .
AKISTKỌ WM OFAKA N’AKA HINDU SHAKTA TANTRA
Arụ ụka nke Shakta Tantra ka arụrịta ụka nke ukwuu. Okwu ahụ tantra pụtara mbụ nke otu akụkụ nke ederede, ma mesịa mee ka okwu ahụ sawanye iji tinye echiche ndị a kọwara n'ime akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị ahụ. Ebumnuche e sitere na okwu ahụ sitere na okwu Sanskrit maka ịkpa akwa na ndo, yabụ echiche ndị ejikọtara ọnụ. Ihe eji eme ya na mbu bu na ihe odide Vediki, na-ezo aka dika ihe nlere ma obu ihe nlere anya. E mechara nwee echiche aghụghọ mgbe ụfọdụ, Tantra abụrụla ụdị okpukpe dị n'okpuru ọdịnala okpukpe buru ibu ma bụrụ nke a bịara mara dị ka okpukpe Hindu. Tantra nwere ike itinye usoro, usoro, na sistemu, na-eduga ebumnuche okpukpe. Tantrika bụ onye na - agbaso echiche na ememe a kọwara na ederede. Tantzọ aghụghọ dị iche iche gụnyere iji mantras (okwu dị nsọ), mudras (ọnọdụ akara atụ), yantras (ihe osise a na-ahụ anya, na-abụkarị n'ụdị nke geometrical, nke na-arụ ọrụ dị ka maapụ nke ụwa dị n'ime a na-ahụ site na ntụgharị uche), puja (ofufe a na-efe ofufe), na diksha (nnabata) nke onye nkuzi (guru). Ntụgharị uche (dhyana) na Tantra na-eji anya a na-ahụ anya, na ụdị ọhụụ a na-ahụ anya gụnyere nsacha nke mmadụ na gburugburu ya na idobere chi dị iche iche n'ime ahụ (nyasa).
Tantras na-elekarịkarị anya na chi ndị Hindu, na tantras nke mepụtara n'etiti ọdịnala Shakta nke Hindu lekwasịrị anya Shakti, dị ka ike nwanyị. Ofufe ofufe chi n’India merela agadi, enwerekwa ihe oyiyi ndị na-egosi ndị na-amụ banyere ihe mgbe ochie na-egosi ofufe chi malitere na brọdụ 7000-6000 na Madhya Pradesh. Ukwe Devi Sukta nke Rig Veda kọwara chi nwanyị (devi) onye kere ụwa n’enweghi oke dị elu, na onye dị adị ka enweghi ngwụcha na nsụhọ ebighi-ebi. E dere ederede dị iche iche n'ihe dị ka afọ 1500 bce Chi a bụ Devi ma ọ bụ Shakti, onye mechara ghọta ka ọ were ụdị chi ndị ọzọ, dịka Sarasvati, Lakshmi, Durga na Parvati.
Ofufe chi nke chi abụrụla ụdị ma ọ bụ ịrọ òtù okpukpe Hindu, nke a na-akpọ Shaktism taa. Shafọdụ Shaktas (ndị na-eso ụzọ Shakti) n'ozuzu ghọtara Chi nke ịbụ onye kachasị elu, kachasị, eziokwu ebighi ebi nke ịdị adị niile, dị ka echiche nke brahman (nke kachasi na enweghị nkwekọrịta) na omenala Hindu Vedanta. A na-ahụta ya ka ọ bụrụ n’otu oge ihe nile ekere eke, ihe okike ya, na ike na-akpali ya ma na-achịkwa ya, na nke ihe nile ga-alaghachi. Formsdị ndị ọzọ nke Shaktism na-elekwasị anya n'otu chi, bụ onye ghọrọ Onye Okike nke ụwa na onye nzọpụta nke mkpụrụ obi. Omenala nke ofufe (bhakti) kpaliri ụdị Shaktism ma mesie ịhụnanya nke chi nwanyị ahụ ike. Aghota udi ma obu chi nke chi di iche iche ka ha mee dika chi nke onwe ha ma obu ndi ndu ime mmụọ, a na-akpo Ishtadevi.
Ihe odide mbụ nke Hindi Shakta ticric na India sitere n’ihe dị ka narị afọ isii ruo asaa nke ce (Iju Mmiri 2006). Edere ha na Sanskrit. Tantra ji nwayọ ghọrọ ihe ewu ewu, ebe akwụkwọ na-aga nke ọma na narị afọ nke iri ruo na nke iri na anọ. Tantra jiri nwayọ daa na India na narị afọ nke iri na isii, na mmụba nke okpukpe ofufe (bhakti) na mmetụta nke Islam, ọ bụ ezie na edewo ụfọdụ ihe kpatara ya kemgbe oge ahụ.
Enwere ike ịchọta ụzọ abụọ nke ọdịnala siri ike Shakta, ndị a na-akpọ ndị Srikula na ndị Kalikula. Kula pụtara “ezinụlọ” ma ọ bụ “agbụrụ,” a na-ejikwa okwu a ebe a na-ezo aka na ụmụazụ nke chi dị iche iche. Na ọdịnala Srikula nke ndịda India, a ghọtara chi nwanyị Shri ma ọ bụ Lakshmi dịka chi kachasị elu. A na - ejikọta ya na chi ọma na ezigbo ọmarịcha, ma ndị mara mma ma ndị na - abara uru, ma na - efe ofufe dịka Lalita Tripura Sundari Akara ya bụ Sri yantra [Image dị n'aka nri] ma ọ bụ Sri Cakra. Na ọdịnala Kalikula nke ugwu na ọwụwa anyanwụ India, chi nwanyị Kali bụ chi nwanyị bụ isi, nke a na-efe ofufe dịka Durga, Chandi, Tara, na chi nwanyị a na-akpọ Mahavidyas. Kali bụ nne na-ahụ n'anya nke na-echebe ụmụ ya na oke ọkụ ya na-eche ha nche. Ọ na-eyi elu elu na-atụ egwu (ya na akpụkpọ anụ na-acha anụnụ anụnụ, na ezé ndị nwere akara, na olu nke skulls) mana n'ime ya ọ mara mma. Ọ ga - ekwe nkwa ịmụgharị ọzọ ma ọ bụ nnukwu nghọta okpukpe, ya na ofufe ya na - ezukọkarị, ọkachasị n'oge ememme, dịka Kali Puja na Durga Puja. Traditionszọ ọdịnala a siri ike ka dị adị na India, na-enwekwa nnukwu mmetụta.
E nweela ọtụtụ nghọtahie nke echiche siri ike. Textsfọdụ ederede siri ike na-akọwa ụzọ abụọ, aka ekpe na ụzọ ziri ezi (vamachara na dakshinachara). Ndị edemede Britain mechara sụgharịa ndị a dị ka "aka ekpe" na "aka nri." Enweghị okwu ọ bụla maka “aka” na Sanskrit, a na-elekwa okwu ahụ anya dị ka ihe na-eleda anya, n'ihi na aka ekpe na India jikọtara ya na omume ịsa ahụ. Thezọ aka ekpe bụ ụdị Tantra na-emetụta ememe nke mmekọahụ na ọnwụ nke kpasoro ndị na-achị ala mmụọ ụjọ. Ebumnuche ahụ dị mkpa bụ imeri egwu na ihe ịchọ mma ndị a nwere, yana maka onye na-eme ya iji nweta mkpofu dị mkpa iji ghọta eziokwu.
Anyị ga-ewepụrịrị ọrụ ụmụ nwanyị gara aga na Hindu Shakta Tantra site na aha ha na ederede siri ike, ebe anyị enweghị akwụkwọ ndị ọzọ anyị ga-atụle n'oge a. Ọ dị mkpa iburu n'uche na akụkụ Akwụkwọ Nsọ anaghị anọchi anya ihe ndị dị n'ụwa. Anyị nwere data akụkọ gbasara agbụrụ na narị afọ nke iri abụọ, ndị ọkà mmụta na-enwe ike ịgba ndị ọrụ ajụjụ ọnụ. Na mgbakwunye, okwu okpukpe dị ọhụrụ pụtara na narị afọ nke iri abụọ. Ndi ohuru ndi ohuru, eweputala ha Shakta Tantra n'uzo ndi oru ya nke ndi India ghara igha dika Tantra. Profaịlụ a na-enyocha ọrụ ndị nwanyị n'oge ochie, n'oge mbubreyo, n'oge gboo, na ọnọdụ dị ugbu a.
ỤMỌDỤ / EKWUKWU NDỊ NA-EBE ECHICHE NDỊ NNA MERE
Maka oge ochie, Brahmayamala Tantra, nke edere site na ihe dị ka narị afọ nke asaa na nke itoolu, na-egosipụta ọrụ atọ dị mkpa maka ụmụ nwanyị. Nke mbu bu nmekorita nke nwanyi (nke ana akpo shakti ma obu duti), onye n’eme ka nwoke dabalu ya aka na ntughari uche ya. A kọwara ya dị ka onye mara mma, dike, gụrụ akwụkwọ na nkuzi siri ike, na-eguzosi ike n'ihe nye guru, chi na di. O nwere ikike nke mkpochapu yogic. Ya na nmekorita nwoke n’eme nmekorita nke ndi nwoke, a na achikota onya ojoo ha ka ha buru mmanye, ka ha nweta ike ma obu ime anwansi. O nwere ike ịbụ nwunye onye na - eme nwoke, ma ọ bụ onye ọbịa. Ejiri ya dika isi iyi nke ike maka nwoke tantrika, mana ederede ekwughi ihe o nwetara site na ememe a.
Ọrụ nke abụọ bụ yogini, n'ụzọ nkịtị ọ bụ nwanyị na-eme yoga (“ọzụzụ”). Okwu ahụ bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ, ebe ọ na - ezo aka na ụmụ nwanyị karịrị nke mmadụ na mgbe ụfọdụ na - emetụta ụmụ mmadụ. Onwere ndi yoginis ndi neme ezi ihe ma jiri mantras fee ofufe, enwere ndi yoginis iwe iwe ndi mmadu n’enye ha obara, enwere ndi yoginis ndi n’eme ezi nkuzi ma enye ha onyinye nri. Aghota yoginis ndi mmadu nwere n’onodu n’anu n’anu nke nne nke sitere na Chi asaa nke Chi. A na-eche na Yoginis bụ ụmụ nwanyị bụ ụmụ nwoke ga-enwerịrị ike inweta siddhis (ike karịrị nke mmadụ) ma nye ha ikike nke nwoke. Somefọdụ nwere mmekọ nwoke na nwoke, akpọrọ viras (dike).
Ọrụ nke atọ bụ sadhaki, nwanyị nke na-eme ụzọ nke mmụọ. A malitere ya n'usoro agbụrụ, wee nweta aha ọhụrụ nke ejedebere na “shakti,” dịka ọmụmaatụ, Adishakti. O nwere ike mewe ihe nwoke maara ya otu otu ma ọ bụ otu. Omume ntụgharị uche ya gụnyere njirimara chi (ọkachasị chi), ọ nwere ike bụrụ onye isi nye ndị otu na-eso ụzọ. Tantmụ nwanyị ndị dị otú ahụ na-ewere nkwa dị elu, chant mantras, ma na-atụgharị uche na-ahụ (maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ọrụ ndị a, lee Torzsok 2014 na Hatley 2019).
Ihe odide oge ochie Kaula Shakta ederede na-egosi ọrụ yiri nwanyị maka ndị nwanyị: ndị nwere chi nọ n'ime ha, yoginis, na ndị mmekọ ememe. Na Kularnava Tantra, nke a na-edebe n'etiti narị afọ nke iri na anọ na nke iri na isii, ọ na-ekwu na nwoke tantrika ga-efe Shakti n'ime ụmụ nwanyị niile, iji mee ka nwanyị ahụ nwee mantras ọcha ma ọ bụrụ na amaliteghị ya, ma nye ya ifuru, ihe nsure ọkụ na onyinye ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ebido ya. Ofufe a dị mkpa maka ofufe, nwanyị nke caste ọ bụla nwere ike rụọ ọrụ dịka ebe obibi nke chi nwanyị.
Ualsfọdụ n'ime ememe ndị a gara n'ihu n'okirikiri okpukpe Shakta taa, dị ka ememe ofufe nke kumari puja (ofufe nke ụmụ agbọghọ) na strija puja (ofufe nke ụmụ nwanyị). Kumari puja ma ọ bụ kanya puja [Ihe osise dị n'aka nri] bụ ofufe nke ụmụ nwanyị dị nsọ n'ihi na chi nwanyị bi n'ime ha. A ga-eji oriọna, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ifuru, nri na ihe ọ drinkụ ,ụ na onyinye, nke nwoke tantrika nke nwere echiche dị ọcha na nsọ nye chi nwanyị ahụ. Ọ na-amata chi n'ime nwa nwanyị ọ bụla ma kpọọ mantras, ma kelee ya, ma gwa ya ka ọ laa. Emere nke a na ụmụ agbọghọ site na otu afọ ruo afọ itoolu, ememe ahụ na-aga n'ihu taa dị ka akụkụ nke ememe Durga Puja a ma ama. N'oge ahụ, a na-ewere ya dị ka ememe ofufe, nsọpụrụ ụmụaka, kama ịbụ ememe mmeme.
Tantrika ga-efekwa ụmụ nwanyị toro eto na nsogbu puja, nke a na-ahụ na chi nwanyị ahụ ga-ebi n'ime nwanyị na-amụ nwa. E nwere ofufe nke di na nwunye di na acho acho, bhairavas (okwu nke putara ma ndi n’eru nke chi Shiva na umu nwoke) na onyinye, na onyinye ha na ntinye onwe ha, na-amata ma chi ma n’ime ya, ka ha nweta ihu oma nke chi ya na odi ohu ya. yoginis. (Bhairava, "ihe di ujo" bu ihe anakpo Shiva na okpukpe Hindu, umu nwoke ya na - efe efe na - ewere aha ahu.)
Ọrụ ọzọ bụ nke yogini. Ọzọkwa, enwere ụmụ nwanyị ejiri Ananayas na anụ ahụ ndị a na-akpọ yoginis. Na Kularnava Tantra kwuru na enwere nde yoginis nke mmụọ chọrọ ka e fee ha ofufe, ọ bụrụ na ha abụghị, nwoke tantrika na-adị ka ha ele (anụmanụ) ha (ha enweghị ya iwe). Ha bi na mbara igwe, n'ebe dị nsọ, ma na-elekọtakwa osisi, ndị a ga-efe ofufe. E nwekwara ndị mmadụ na-elekọta-yoginis, ndị mara mma, ma ndị amamihe, na ndị ebido. Ha aghaghi ịdị njikere ime enyi ma ekwesighi ịmanye ha isonye. E kwesịrị ịsọpụrụ ụmụ nwanyị dị otú ahụ, na-ekwutọghị, kparịa ha, ghaa ha ụgha, ma ọ bụ imerụ ha ahụ. N’ezie, dị ka ụmụ nwanyị niile, a ga-emeso ha dị ka ndị nne; ọ bụrụgodi na nwanyị mere otu narị mpụ, ekwesighi iti ya ihe, ọbụghị otu ifuru (Das 1383/1977). Agbanyeghị, na Kularnava Tantra na-ekwupụta na nwanyị ahụ ga-abụ nwa agbọghọ mara mma, nwa agbọghọ, onye na-asọpụrụ Chineke, onye na-efe ya na chi ya, na-amụmụ ọnụ ọchị, na-atọ ụtọ, ma na-enweghị ekworo, n'etiti àgwà ndị ọzọ. Nwa nwanyị nke nwanyị nwere ike ịbụ onye na-enweghị mmasị ma ọ bụ nke okenye ma ọ bụ nke na-ero ụra, ọ gaghịkwa enwe mmetụta ma ọ bụ ya na onye òtù ọlụlụ ya ụka; ndị a na-ewepụ ya ka ọ ghara ịdị na-eme ihe ike, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ebidola ya.
Ọ bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụrụ na yoginis mmadụ akọwara na Kularnava Tantra dakọrịtara na ndị mmekọ nwanyi na mmemme mmekọahụ; Nkọwapụta nke ọissụ na chakra mmekọahụ, nke dị na ime ime ala, na-eji okwu ụfọdụ yogis na yoginis mgbe ụfọdụ. Okwu a "chakra" pụtara n'ụzọ nkịtị, a na-ejikwa ya ụzọ abụọ mee ihe na akwụkwọ ahụ siri ike. O nwere ike ịbụ okirikiri nke ndị na-efe ofufe (ya bụ, gburugburu ndị mmadụ na-eme ememe mmekọahụ), ma ọ bụ na-ezo aka na chakras ma ọ bụ ebe ike dị n'akụkụ spain na ahụ aghụghọ. A na-eji eserese ha mee ihe n'oge kundalini yoga, omume nke gụnyere ịtụgharị uche na anụ ahụ aghụghọ. A na-eme ya iji bulie shakti ma ọ bụ ume, kundalini, nke a na-agbụ dị ka agwọ dị n'okpuru ala nke spain. Ike kundalini na-ewelite ogwe osisi ma ọ bụ sushumna, site na chakras ruo mgbe ejikọtara ya na chi Shiva mgbe kundalini rutere sahasrara chakra, nke edobere ọnọdụ ya n’elu okpueze nke isi.
The Kularnava Tantra na-ekwu na ụmụ nwanyị tantrikas bụ ndị na-emekọ ihe ọnụ ga-ezochi ọrụ a, ebe nwanyị lụrụ nwanyị na-ezobe ime ya site n'aka onye hụrụ ya n'anya. A na-ekwu na ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ Hindu, dị ka Vedas na Puranas, na-egosipụta onwe ha dị ka ndị akwụna, ebe a na-akpọ tantras bụ ihe nzuzo, dị ka nwunye nwa na-agbachi nkịtị n'ụlọ (nke ndị ikwu di ya). Omume a na-eme eme bụ ime ihe na-amasị chi nwanyị, yabụ a na-anabata omume ndị amachibidoro. Njikọ ya na onye otu na-anọchite anya nnwere onwe, ịrahụ ụra bụ samadhi, iri nri na-enye nri n'ime ọkụ ịchụ-aja; E kwesịrị ịtụgharịgharị ihe niile dị ka ihe dị nsọ. (Samadhi na okpukpe Hindu na-ezo aka na ọnọdụ zuru oke, na-ewetara onye ahụ ọnọdụ nke ịdị n'otu na Chi.) Ndị yogis na yoginis na gburugburu ememe na-anọchi anya chi Shiva na chi nwanyị Shakti, na oke nke alụmdi na nwunye ụwa bụ nwa oge. leghaara anya. Aghọta iwu a, na-eduga na nnwere onwe, nke mbụ site na njide ndị nkịtị dịka mgbochi caste, na ọzọ site na echiche niile amachaghị. Partnersmụ nwanyị na - eme mmemme nwere ike ịme mantras, na-ahụ anya, na-atụgharị uche, ọkụ ịchụ àjà egbu egbu, na omume ndị ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ememe ahụ gara nke ọma, ha nwere ike nweta njikọ kacha chi na chi nwanyị (lee Das 1383/1977).
Oge Tantrism Oge A Na-egosi na Mahanirvana Tantran'agbanyeghị na ederede abụwo isiokwu nke arụmụka bara ụba. Enwere akụkụ nke ememe na-egosi na ọ dịla agadi, nke mere na ụfọdụ ndị ọkà mmụta dere oge ederede site na nke iri na otu ruo na nke iri na abụọ na-ekwu Ma enwere echiche ndị pụtara na -echeta echiche ndị metụtara ọchịchị site na narị afọ nke iri na asatọ. Ndị a gụnyere machibidoro igbu ndị nwanyị di ha nwụrụ (sati) na olili ozu nke di ha, nkwado maka ịlụ nwanyị di ya nwụrụ, agụmakwụkwọ nwata, ihe nketa ụmụ nwanyị (maka ndị nwunye na ụmụ nwanyị), na igbochi ịkpọpụ ndị nwoke nwere nwunye na ụmụaka. Maka ebumnuche edemede a, ọ dị ka ọ dabara adaba iji depụta ederede site na narị afọ nke iri na asatọ, ka ọ bụrụ ederede n'oge a.
Enwere ọrụ abụọ dị mkpa maka ụmụ nwanyị Mahanirvana Tantra: dika ndi mmadu n’eme ihe ike na dika ndi n’eme eme ozuzu ma obu ilee anya shaktis. Onu ogugu a gunyere yoginis, azais (mmuo nwanyi) na matrikas (nne nke Chukwu). Ndị yoginis bụ ndị na-eje ozi nke Devi (Chi nwanyị), ndị na-agba egwu na nwoke bhairavas na chi. Ha nwere ike inye siddhis (ike pụrụ iche) nye nwoke tantrikas na-asọpụrụ ha, dịkwa ka ụmụaka na matrikas (ndị a kpọtụrụ aha na-agafe na ederede). Ofdị nke Devi ma ọ bụ chi nwanyị mesiri ike na ederede a bụ Adya Shakti Kali, [Image right right] god of power primordial, onye ekwuru na-ebi n’ime obi mmadụ niile.
Practmụ nwanyị na-eme ya ma ọ bụ na-elebanye anya shaktis na-eso nwoke ahụ akpọtụ tantrikas. Agbanyeghị, ka anyị bi ugbu a na Kali Yuga (afọ nke ọdịda na esemokwu), agbanweela ememe ọdịnala na Mahanirvana Tantra. Na Bhairavi (nwunye Shiva) na Kula chakra, ememe a anaghịzi akpọ maka mmanya na omume mmekọahụ. Kama nke ahụ, ndị sonyere na-eri ihe ndị na-atọ ụtọ ma na-atụgharị uche n'ụkwụ ụkwụ nke chi nwanyị. Maka chakra, ụmụ nwanyị kwesiri ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ogologo oge ma ọ bụ na ọlụ di na nwunye nwa oge, kwesiri ka a sọpụrụ ha ma jiri ha kpọrọ ihe. N'ime okirikiri, ụmụ nwoke niile bụ onyoghi Shiva, ụmụ nwanyị niile bụ Dvi. N'ime chakra, a machibidoro iwu caste na ịdị ọcha, ihe niile na-abụkwa brahman (na nke a, akụkụ nke ọnọdụ kachasị nke mmụọ).
The Mahanirvana Tantra na-ekwu karịa omume jikọtara ọnụ karịa iwu iwu maka ụmụ nwanyị. Nwoke kwesịrị ịna-akwanyere nwunye ha ma na-ahụ ha n'anya, na-enye ha onyinye ma na-ekwu “okwu dị ụtọ.” Tantrika nke nwunye ya kwesịrị ntụkwasị obi ma nwee obi ụtọ ga-abụ chi kachasị amasị ya. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ iwu maka nwoke vira tantrika, a na-ekwukarị nlebara anya ịma anya dị ka otu onye. Omume ịkwa iko niile bụ maka ndị na-eme ụmụ nwoke, na enweghị ụmụ nwanyị agakọtara aha. Mụ nwanyị bụ ngwa eji eme ihe maka ọdịmma onwe ha, ọ bụ ezie na ihe odide ahụ na-emesi ịdị mkpa nke ụmụ nwoke ike ịgwọ ha nke ọma na ndụ nkịtị (Avalon [Woodroffe] 1913/1972).
Ọrụ ụmụ nwanyị nọ na Tantra na-abawanye na oge a. Enwere ụmụ nwanyị tantrikas bụ ndị ụkọ ọrụ, na ụmụ nwanyị dị nsọ nke ụdị dị iche iche: sannyasini bụ nwanyị hapụrụ ndụ nke ụwa; brahmacharini bụ nwanyị raara onwe ya nye na ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ije ozi na irube isi nye ọdịnala; yogini bụ nwanyị na-eme yoga, karịsịa kundalini yoga; na grihi sadhika bụ nwanyị lụrụ nwanyị ma hapụla di ya ịchọ ndụ nke mmụọ. Nwanyi nwere ike buru onye ji uchu fee ofufe, ya na ife efe mantras ma obu ya dika “nwanyi nwanyi” nwere ike buru onye oru ya bu oru. Nwanyi tantrika nwekwara ike ịbụ nwunye nke na-eme ụdị mmekọahụ dị oke njọ dịka akụkụ nke alụm di ya ma ọ bụ onye na - eme ememe mmekọrịta nwoke na nwanyị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị. O nwere ike bụrụ onye aka ike, onye nkuzi nwanyị, na-abụkarị celibate na isi nke otu ndị na-efe ya ofufe ma ọ bụ ashram. O nwekwara ike bụrụ nwanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ nwunye na -aghọ ụja, onye omume ya metụtara ememe ofufe, agwakọta nke ịhụnanya nke chi na ijere chi ahụ ofufe, na ntụgharị uche siri ike maka ofufe.
Ọ bụ ezie na ọrụ dị mkpa iji mee ememe mmekọahụ bụ ma ọ bụ ihe oyiyi a kacha mara amara nke ụmụ nwanyị na Tantra na West, ọ nweghị nnwere onwe na ọnọdụ ndị West na-ejikọkarị ya. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ụdị ọrụ ahụ vesya, nke pụtara nwanyị akwụna ma ọ bụ akwụna. Na Niruttara Tantra na-atụ aro ofufe nke vesya, gụnyere ndị si n'ezinụlọ siri ike, ndị nweere onwe ha na ezinụlọ, ndị sonyere (ọrụ ahụ) afọ ofufo, ndị lụrụ di na nwunye tantrikas, na ndị ejirila mmekọrịta ha na ndị chi. Na ojiji a, "vesya" anaghị ezo aka kpọmkwem na nwanyị akwụna, kama ọ bụ nwanyị na-awagharị n'enweghị ihe ọ bụla dịka nwanyị akwụna nwere, ma nwee onwe ya dịka Kali. O nwere mmeko nwoke na egwu na egwu nke mantras ma tugharia uche na njikọta nke Mahakala (“Onye kachasị oge gafere na ọnwụ,” ụdị iwe Shiva) na Kalika (Kali). [Ihe osise dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na onyonyo a nwere ike ime ka mmadụ mata nwanyị nweere onwe ya ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị ya; enwere oke onwe ya site na oru di iche-iche Niruttara Tantra. Ọ bụghị nwa agbọghọ mara vesya ma ọ bụrụ na ya na nwoke ọzọ na-abụghị di ya; dị ka ederede si kọwaa ya, ọ bụrụ na ọ na-efe Shiva na-abụghị nke bhairava nke ya, ọ ga-ebi na hel na-ere ọkụ ruo mgbe mbibi nke ụwa. Ọ bụrụ na ya na ndị ọzọ na-eme ihe na-emekọ n'ihi agụụ, agụụ maka ego, ma ọ bụ ọnwụnwa ndị ọzọ, ọ ga-aga hel. A na-akpọzi ya pashu-vesya, nwanyị akwụna. Nwoke ọ bụla sonyere ya ga-arịa ọrịa, iru uju na mfu nke ego (Bannerji 1978). Vesya kwesịrị ekwesị kwesịrị ịdị ọcha ma nwee nsọ nsọ, na-eso nwunye ya eme ememe okpukpe. O nweghi ike kwanyere ya ugwu ma buru onye ozo, ya mere o nweghi ike iku onye ozo ya. Ọ bụghị ọrụ a chọrọ n'etiti ndị Hindu.
EBE NDỊ NA-ECHICHE NDỊ NA-EBE NDỊ NA-EME
N'ime echiche pụrụ iche, ụmụ nwanyị na-eme ihe omume ka bụ ezigbo echiche. Dịka ọmụmaatụ, Guptasadhana Tantra na-eme ka anya nke mmụọ guru nwanyị pụta: Ọ dị na Sahasrara, ọtụtụ puku cha cha nke chakra dị n'elu isi ahụ dị aghụghọ, anya ya dịkwa ka petals petus. O nwere ara ure na ukwu di otutu, ma o na-acha dika ruby. O yi uwe na-acha uhie uhie na akwa jew. Ọ na-anọdụ n'aka ekpe nke di ya, aka ya na-egosipụtakwa mudras maka inye boons na nnwere onwe pụọ n'egwu. Ọ mara mma, mara mma ma mara mma.
Ihe onyonyo di otu a dicha iche na eziokwu nke nwa amuma nwoke a gbara ajuju ajuju ajuju, ndi n’adighi okenye, ndi n’alughi nwanyi, oge ufodu na-achu isi, na-esikarị n’obi ojoo na ibi ndu, na-ele anya nke oma ma mgbe ufodu. Ha anaghị akwa akwa ma ọ bụ nke na-esi isi ma ọ bụ nke na-acha odo odo, na-achọ izere ihe egwu dị na ịma mma mmekọahụ. Ihe ikpeazu ha choro bu ka ha mara nma ma di njo, ebe ha no ura na ala ulo temple ma obu na-awagharị njem njem (ha na eme njem nani ha na ha kwesiri igbachitere onwe ha). Ha mesiri ike bụ nnwere onwe na ịnweta nnwere onwe kama ịrara nye ụmụ mmadụ.
Tantmụ nwanyị ahụ [Foto dị n'aka nri] gbara ajụjụ ọnụ ma kọwaa ya site n'aka ndị na-enye akụkọ na West Bengal, India, n'oge ọrụ ubi na 1984, 1994, na 2018 (lee McDaniel 2004 maka ihe atụ zuru ezu) chọrọ ịdaba ụzọ ise:
Celibate tantric yoginis. Womenmụ nwanyị ndị a, nke ọnọdụ ha kachasị elu n'etiti ụmụ nwanyị a gbara ajụjụ ọnụ, bụ ụlọ obibi ogologo ndụ. Ọtụtụ bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs, na ụfọdụ ụlọ arụsị, isi ala (ebe a na-atụgharị uche na ebe ntụgharị uche) ma ọ bụ gburugburu ọmụmụ ọmụmụ. Somefọdụ kwusiri ike mkpa ọ dị ịrara nye chi ma ọ bụ guru, ndị ọzọ kwenyere na ndị na-eso ụzọ ha ka ha bụrụ ndị ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ akụkụ zuru oke nke Chi nwanyị. Tantra maka ha bụ omume raara onwe ya nye nke metụtara mantras, ntụgharị uche a na-ahụ anya, austerities, na kriya (omume ememe). Maka ha, ebumnuche Tantra bụ iji nweta nnwere onwe yana Shakti, ma bụrụ chi nke ya na ike nke mmụọ. Maka otu mmụọ, ememme ahụ na-atọ ụtọ gosipụtara 'akụkọ ihe mere eme', na-enye ike 'ịhụ n'ime,' iji na-ele ndụ nke mmụọ nsọ. Nzube ya bu inweta “chi” Shakti (sakti labh kara), ime ka o biri n’obi. Ọ bụ Shakti onye na-eme ka mmadụ nweta nghọta, onye na-ewetara mmadụ na steeti kachasị. Shiva abaghị uru ọ bụla dị ka ozu, ọ bụ ya mere e jiri kọwaa ya dị ka otu (ihe oyiyi na-efe ofufe mgbe niile nwere Kali na-eguzo n'elu Shiva dị nro). Na onyonyo dị n'aka nri] na kundalini yoga, akụkụ nwoke na nwanyị na - emekọ ihe ọnụ, ọ dịghịkwa mkpa ọ bụla ịdị n'otu dị n'etiti ndị mmadụ n'otu ụwa. Maka nwanyị ọzọ guru nke otu ndị na-efe ya ofufe, ememe ọdịnala bụ ụzọ isi nweta Shakti njikọta, nke na-adịgide karịa ndụ gị niile. Mantras, mudras, ura na ememe bu uzo nke idozi aru nye uzo Shakti. Ihe jikọrọ Adya Shakti (Primordial Shakti) bụ steeti kachasị elu maka enwere ike, n'ihi na ya na brahman na nne nke eluigwe na ụwa. Dịka nwanyị ọzọ na-ekwu maka mkpụrụ ndụ ihe ọmụmụ nke Sri Ramakrishna (1836–1886) kwuru, emume Tantra sadhana (omume ime mmụọ), ya na ntụgharị uche ya na usoro mmụọ, bụ ụzọ kachasị mma iji gosipụta nrara nye guru na chi nwanyị. Onweghi onye n'ime ndi ulo nwanyi nke kwuru na lata sadhana, nmeko nmeko bu ihe ojoo, ma obu imehie, ma obu ihe nleda. Naanị ihe ha kwuru bụ na ọ dị ụkọ na adịghị mkpa Tantfọdụ ụmụ nwanyị tantrikas bụ ndị nwere nkwuwa okwu karịa, na-ekwu na ọ nweghị mmadụ ga-anapụ ikike ha nwetara site na ngwa ngwa siri ike na ọgụgụ nke mantras. Ọtụtụ ụmụ nwanyị tantrikas kwuru na ememe mmekọahụ ga-eme ka ike nke mmụọ ha gwụ.
Womenmụ nwanyị dị nsọ. Thesemụ nwanyị ndị a, ana-akpọ grihi sadhikas, alụọla nwunye mana ha hapụrụ di ha na ezinụlọ ha ka ha soro kpọọ ndị okpukpe. Ha nwere ọnọdụ dị ala karịa ndụ ụlọ ogologo ndụ, mana ụfọdụ nwere ndị na-eso ụzọ. Ọtụtụ mgbe, ha ga na-awagharị, na-atụgharị uche n'ihe ma na-efe ofufe, ma na-ebi n'ụlọ nsọ ma ọ bụ na ntụ. Fọdụ na-abanye n'ime steeti nke chi nwanyị (Kali bhava), ma ọ bụ chi ndị ọzọ, na-abụ site n'ịkpọ mkpu mkpụrụ osisi (“mkpụrụ” ma ọ bụ ihe ọzọ) ma ọ bụ bụọ Devi abụ. Tantra maka ha jikọtara ofufe na nnweta, na-abụkarị nzaghachi nye chi sitere na chi. Ebumnuche nke Tantra bụ ịgbaso uche nke Chukwu, oge ụfọdụ na ọnọdụ ibi ndụ ugwu. Ọtụtụ mgbe, nwanyị nsọ dị nsọ site na kulaguru, onye ụkọchukwu nke Shakta tantric ma nụ oku nke amụma site na chi nwanyị na nrọ ma ọ bụ ọhụụ, onye rịọrọ ya ka ọ rụọ ọrụ pụrụ iche (ọ bụghị ịtacha ntutu ya ma ọ bụ iri nri ụfọdụ nri. , dịka ọmụmaatụ) na ịga njem njem. Ọ hapụrụ ụlọ, ma lanarị site n'arịrịọ arịrịọ, ịkọ akụkọ banyere ya, inye ya ngọzi, ma ọ bụ ịbụ onye nwere ya, na inweta onyinye site n'aka ndị na-ekiri ya. O nwetara ọha obodo mgbe ọ malitere ịdọrọ ndị na-efe ofufe aka, mgbe ụfọdụkwa, ọ nwere ike ịnwe ike pụrụ iche nke chi nyere ya n'aka (ọkachasị ikike ịgwọ ọrịa ma ọ bụ ịtụwa nri). Ọ bụrụ na ọ nwere ihe ọzọ, chi nwanyị bụ Kali nwere ya, ọ bụ ezie na chi ndị ọzọ nwekwara ike ịnwe ya. Ufodu ndi yi uwe eji ewu aru na uwe, uwe uhie, ntutu di ka nma, rudraksha malas (eriri nke 108 ekpere nke nwere nkpuru diri Shiva) nke eji akwa di egwu ma buru nnukwu ihe (ma obu igosiputa ntinye nye chi Shiva na nchebe). (Na nsogbu nke mmekpa ahụ maka ndị na - ahụ maka ụmụ nwanyị, lee DeNapoli maka ọbịbịa.)
Ndi nwunye Womenmụ nwanyị ndị a mere mmekọahụ dị omimi ma fee ofufe dịka akụkụ nke nrara ha nye di na guru. Otu nwanyị na-ebido otu nwanyị ihe di ya ma na-eso nkuzi ya. Tantra maka ndi nwanyi achoghi oru bu udiri oru ha, nke gunyere irube isi nye di na guru, ma soro oru nke nwanyi (stridharma). Ebumnuche nke Tantra ebe a bụ imezu dharma na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ihe banyere otu di na nwunye dị otú ahụ a gbara ajụjụ ọnụ, nwoke ahụ kwusiri okwu ike na ọ pleasureụ na obi ụtọ (ọ na-ekwu na nwoke tantrikas nwere ike inwe mmekọahụ ruo awa anọ), wee nwekwuo ọmarịcha mma. Tantra bụ ihe na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ, na ụzọ isi gbanahụ usoro a. Otú nwunye ya si ele ihe anya dị ezigbo iche. Omume Tantric maka ya bụ nrube isi nye guru na Chineke, na ụzọ isi nyere di ya aka ma mee ya obi uto. Tantra abụghị nnupụisi, ọ bụ ọrụ dịịrị ya. A naghị ajụ ndị nwunye Tantric ụlọ ajụjụ ọnụ, n'ihi na ha anaghị apụta dị ka ndị na-eme ọrụ, ha na-eme ka a mata onwe ha dị ka ndị nwunye ọdịnala na-agbaso nkuzi okpukpe.
Consorts ọkachamara. Womenmụ nwanyị ndị a na-eme ụdị mmekọahụ na ofufe siri ike dị ka ụzọ ha ga-esi na-ebi ndụ, nwoke ahụ bụkwa onye ya na ya na-eme mmemme na-akwado nkwado (yana ụmụ ya). Nwaanyị ahụ nwere ike isi n'otu nwoke gafere na nke ọzọ, dabere onye ga-echebe ma kwado ya. Tantra ebe a bụ ọkachamara mmekọahụ, ọrụ dị ka ọrụ. Ebumnuche nke Tantra bụ inyere nwoke ahụ aka nwanyị aka ọrụ ya, kpata ego, ma nwee ike nweta ụlọ na-adịgide adịgide na nwoke nchebe. Ọrụ dị otú a bụ ọnọdụ dị ala na mpaghara West Bengal. Aghọtara ụmụ nwanyị a nwere ọrụ ọpụrụiche na ọrụ ịgba akwụna, dịka ụfọdụ nwere aka ikike ịchị ụmụ nwoke (dịka chi Kali na-eme). Odi ka odi ka ihe tinyekwuoro ha ikike ulo oru ndi eji ikike iteghete na iri isii na anọ, ikike ndi umu aka ndi nwere ike inweta. A gwara ndị gbara ajụjụ ọnụ na ihe ka ọtụtụ n'ụmụ nwanyị ndị ahụ bụ ndị ogbenye, chọọkwa inwetakwu ego maka ezinụlọ, ma ọ bụ na ha bụ ndị inyom di ha nwụrụ (ọkachasị ụmụ nwanyị di ha nwụrụ, ndị di ha nwụrụ tupu ha enwee ike ịlụ di na nwunye ahụ) ndị na-enweghị ụzọ ọzọ ha ga-esi mee ya. ibi. Inffọdụ ndị ozi mara ha ikpe, ma ihe ka ọtụtụ n’ime ha metere ya ebere. Otutu edemede nke onye okacha amara nke ndi Bholanath Bhattacharya weputara ndi ajuju ha na ndi nkuzi oru ha nke oma (Bhattacharya 1977).
Mee ka ndị nwunye na ụmụ nwanyị di ha nwụrụ. Womenmụ nwanyị ndị a bụ ndị nwe ụlọ, ndị na-agbakwunye omume siri ike dị ka akụkụ nke ofufe. Maka ha, Tantra bụ ụdị nke nraranye, karịsịa na njikọta na bhakti yoga. Ebumnuche nke Tantra bụ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ ma nweta ngọzi, n'ime ezinụlọ, na-eji ticulat mantras na nlere anya maka ofufe. Nwunye nwoke na alu ya no n ’ulo, enweela umu aka, odighi acho ozo, ma obu luru ulo nwoke di na nwunye dika ama ama na Bengali Shakta senti Anandamayi Ma (1896-1982). Ihe onyonyo di n'aka nri, nwunye na - acho onwe ya ma buru onye na - eme ihe nzuzo. Ọ na-etinye oge ya niile na ụlọ ofufe n'ihu ihe oyiyi chi, ebe di na-enweta ego ya ma na-anọkwa n'ụlọ. Mgbe ụfọdụ nwunye nwere ike ibu pujarini, onye ndu ofufe, maka otu ụmụ nwanyị ndị ọzọ, ma ọ bụ onye isi nke kirtan, bụ abụ ofufe, otu. N'ụdị ndị a, ọ nwere aha ọma dị ka nwanyị dị nsọ, ebe di ya nọkwa n'azụ. Ọtụtụ ndị di nwere oke amasi na nwunye na-aghọ ndị ohu na-eme ofufe na afọ mgbe e mesịrị.
Enwere ike ịchọta Shakta tantric na omume ofufe n'ime ụlọ dịka ụmụ nwanyị di ya nwụrụ na-eme. Onye nwe ụlọ di ya nwụrụ nke jiri ndụ ya niile na-efe ofufe na njem njem nsọ nwere ike ịkwanyere ugwu ma ọ bụ onye nlelị. Sfọdụ ndị nna ochie di Shakta, ndị a na-akpọ ụmụ nwanyị dị nsọ site n'aka ndị ezinụlọ ha, na-achịkwa ma ụlọ ha na ndị ụkọchukwu brahmin a na-akpọ maka ememe. Ha jide mkpịsị ugodi nke ụlọ na igbe igbe, ma si otú a nwee ike ịchịkwa ezinụlọ, n'agbanyeghị ịkpọasị ha. N'aka nke ọzọ, a na-eleghara ụfọdụ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ na-abụghị Shakta anya, naanị ha na ndị a na-achọghị, ebe ndị na-elekọta ha lebara ha anya (maka ihe ndị ọzọ, lee McDaniel 2004).
Ndị a niile bụ ndị na - eme Hindu oge a na India. Mana n'akụkụ akụkụ nke nwanyị dị ugbu a ndi dikwa uchu, anyi nwekwara ndi dibia, ndi ozo, ndi ozo, na ndi ozo ndi New Age Tantra na West. N'ihe ngosi nkwenkwe na ememe a dịgasị iche iche, chi chi agbaala ka ike ndụ, agụụ mmekọahụ, okike nke ụwa na ụdị ndị ọzọ na-abụghị echiche ha. Onwere echiche ufodu zuru ebe nile: na Tantra na nmekorita nwoke na nwanyi, na “yoga ihunanya” bu iji gwọ ogbaaghara inwe nmekorita nke nwoke na nwanyi, na inwe obi uto kari na mmadu agha ga enyere uwa aka.
Bhagavan Sri Rajneesh (1931–1990, ka amachara Oshos) bidoro mebe ụzọ a, nke amụrụ n'ime ezinụlọ Jain wee nupụrụ isi na nkwuputa okpukpe ọdịnala ezinụlọ ya. Ọ mepụtara ụdị Tantra nke ya, na-ekwu na Tantra enweghị ederede ma ọ bụ ememe okpukpe, na ọ bụ nnupụisi na nnwere onwe. Ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya neo-sannyasins na neo-sannyasinis, ndị kwesịrị nhapụ ọzụzụ ọ bụla, gụnyere n'agbụ nke alụmdi na nwunye. Ndụ ha kwesịrị ijupụta na obi ụtọ, ebe ezi ụzọ mmụta dị sitere na “mmekọahụ nke mmụọ” ma ọ bụ “mmekọahụ dị nsọ.” Ọtụtụ okpukperechi ọdịnala gbasoro echiche ya, nke ndị na-agbaso ya na-ekwukwa na ha na-agbaso omume tara akpụ. Ọrụ ụfọdụ maka ụmụ nwanyị nọ n'ime otu ndị a bụ:
Ndị na-agwọ 'ọnya mmekọahụ', ndị ndụmọdụ, ndị na-agwọ ọrịa na ndị nnọchi anya, ndị omume ha ga-agwọ 'oke agụụ' nke ụwa a. Ewere ihe uto na ochicho ndi mmadu karie ka ha gwọta uwa site na mmetọ, site na ịba ụba ume ndụ nke ndị na-eme ọrụ (nke ga-emetụta ụwa). Ọtụtụ mgbe, a na-etinye usoro ndị dị ka ume iku ume, bioenergetics, na mmega ahụ. A na - aghota Kali mgbe ufodu dika akparamaagwa nke oke nwanyi. (Dịka ọmụmaatụ, lee "Mụta Autantic Tantra" 2018; Rose 2020; na Shastra 2019.)
Gurmụ nwanyị nwoke na nwanyị na-akụzi “yoga nke ịhụnanya” iji nyere ụmụ nwanyị aka inwe “ndagwurugwu ndagwurugwu,” nke ga-eweta Ọgbọ nke Chi. A na-ekwukarị ederede Tantric, mana mgbe ha dị, a na-ekwu na ọ bụ ụmụ nwanyị dere ya. Ọtụtụ ndị ọzọ na-ewu ewu bụ Kama sutra, ederede sitere na Hindu banyere ezigbo ndụ, nke gụnyere ntuziaka ndị ọzọ na-enye aka, dị ka otu esi achọ nwunye na otu esi egbochi ntutu gị ka ọ ghara isi awọ. Dika ihe edere, Kama sutra abụghị ihe okpukpe ma ọ bụ nke a na-ejighị n'aka. (Dịka ọmụmaatụ, lee Muir na Muir 2010; yana webusaiti, Amara Karuna ; Simone ; “Tantra dị ka Ihe Ahịrị Ọrịa”) ; na Abụ Ọma Isidora .)
Tantric shamanesses, onye na-ekwu na ọ na-eweta ụmụ mmadụ kewapụrụ ụwa nso na ihe ọkụkụ na ụdị anụmanụ, ịghọta "tricric pulsation nke eluigwe na ụwa." Nke a gụnyere ihe ndị pụrụ iche dị ka Anam Udeme na Nnụnnụ Nkịtị. A na-atụgharị uche na "otu ihe metụtara agbụrụ", dịka mmekọrịta nna nna Sun na mama ụwa. (Ihe atụ gụnyere, Tantric Shaman ; Venus Rising Association ; Erickson ; Temple nke Bliss ; Pomar ; Phillips 2020; na “Shedding Skins” 2018.)
Ndị isi nke “anwansi ime anwansi,” na-egosi mmetụta Ọdịnala Ime Anwansi Anyanwụ .wa. Ebumnuche bụ inweta ikike karịrị nke mmadụ, dịka ime ka ahụ mmadụ bụrụ okenye, ịmụ amamihe nke ime mmụọ, na ịba ọgaranya n'enweghị ọrụ. Onye nchụ-aja na-agwakọta omume Eshia na nke Europe, ma nwee ike rụọ ọrụ dị ka onye na - ejide ike maka nwoke na - eme ya (ọ nwere ike ịbụ ebe ịchụ aja maka Black Mass ma ọ bụ mpaghara nke Sephiroth, ihe sitere na Chineke, nke Hermetic Qabalah). O nwere ike bụrụ onye na-arụsi ọrụ ike, na-arara orgasms ya na mmezu nke anwansi. O nwere ike bụrụ “onye ndu ike iku ume,” “onye isi na-edugharị agụụ mmekọahụ,” ma ọ bụ onye na-eme ka ike gwụ nwanyị. N'ebe a anyị na-ahụ mmetụta nke ọnụ ọgụgụ ndị dị ka Aleister Crowley (1875–1947) na Wilhelm Reich (1897-1957), yana akụkụ ụfọdụ nke Neopaganism. Ebumnuche nke ikike karịrị nke mmadụ (siddhis) na-ebu ụfọdụ nnyo anya n'ụdị ndị otu Hindu Shakta Tantra. (Dịka ọmụmaatụ, lee Tantric Priestess of the Sensual Arts ; Kara 2016; "Ọzụzụ Priestess" ; Szivak 2013; Priestess School site n'aka Sofia Sundari ; Sanders ; Posada 2012; Ciela Alchemy [2020 ]; Wicca India ; “Ndị nhazi” ).
Ndị ọkà mmụta na-arụ ụka ma ụdị ojiji a na-eme ka ihe atụ nke Hindu dị ka mgbakwunye na ọdịnala ndị ọzọ kwesịrị ịbụ nke a katọrọ dị ka mmejọ na nghọtahie, mụọ dị ka mmekọrịta na-atọ ụtọ, ma ọ bụ leghaara anya. Kasị Hind tantrikas enweghị echiche ihe ha ga-eme ndị na-eme n'Ebe Ọdịda Anyanwụ na-enweghị usoro ọmụmụ, mmalite, omume ndụ, ma ọ bụ ozizi ọdịnala.
IZU / CHALLENGES NDỊ NA-EME NWA
E nwere ọtụtụ nsogbu gbasara Shakta Tantra ụmụ nwanyị na India, ọkachasị na West Bengal. Ọ na-esiri ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ike ịhapụ ezinụlọ ha ma gaa bụrụ ndị na-awagharị awagharị. A na-atụ anya ka ụmụ nwanyị lụọ nwanyị ma mụta ụmụ, ọ bụghị n'ịmikpu onwe ya n'oké ọhịa na ugwu iji soro ọkpụkpọ òkù sitere n'aka chi. Ọ bụrụgodi na ha sonyeere na ashram ma ọ bụ ndị na-egosipụta mmụọ na - ekwu okwu nkuzi, a ka na-enyo enyo ihe ha nwere ike ịdị na-eme.
Tantra bụ omenala zoro ezo na Hindu Hindu nke India n'ihi ihe nzuzo ya na omume ọ na-eme ugboro ugboro n'ebe ndị dịpụrụ adịpụ. O nweela aha ọjọọ n'ihi akụkụ nke ihe ngosi ọjọọ nke Tantra na egwuregwu narị afọ nke asatọ Malatimadhava nke Bhavabhuti jikọtara ihe anwansi, ime nzuzu, na aja ndi mmadu. Nke a bụ akụkọ akụkọ ifo wee bụrụ nke ama ama ma nye onyinyo na-adịghị mma maka omume siri ike kemgbe ahụ, ya na dike na-anapụta nwa agbọghọ na-enweghị ihe ọ fromụ theụ site na ajọ nchara ahụ chọrọ ịchụ ya nye Kali iji nweta ikike karịrị ike. Dịka tantrikas na-atụgharị uche na mbara igwe (ebe a na-agba ozu ndị nwụrụ ọkụ kama ịbụ onye e liri), ma na-achụ àjà ihe atụ, ọ bụghị ikwubiga okwu ókè ịsị na ndị mmadụ nwere ike ịnọ n'ihe egwu. Ọ bụ ezie na enweghị eme ajụjụ ọnụ tantrika gbara ama ma ọ bụ nwee mmasị n'ebe ụmụ mmadụ nọ, ọ ka na-eme ka ya na Tantra n'echiche a ma ama.
Ọzọkwa enwere nsogbu nke ụmụ nwanyị na-eme njem nanị India. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ kwesịrị ịkwanyere ụmụ nwanyị dị nsọ ùgwù, ọ bụghị mmegbu, ọ bụghị mgbe niile. Tantmụ nwanyị tantrikas ekwuola banyere ma sadhus (ụmụ nwoke na-akpọ nwoke dị iche iche) na ụmụ nwoke nwe ụlọ nwara iduhie ha, ụfọdụ ụmụ nwoke ga-anwa ịwakpo ha. N'ihi ya, ụmụ nwanyị ga-enwerịrị ike ịgba ọsọ ma ọ bụ ịlụ ọgụ (iburu osisi ukwu na njide ha bara uru bara uru). Na mgbakwunye na inweta nri, nke a bụ isi ihe mere ịnwe ndị na-eso ụzọ ji dị mkpa maka nwanyị nwa.
Maymụ nwanyị nwere ike ịmegide ụmụ nwanyị ka ha na-eme ihe ike, ọ bụrụgodị na ọ bụghị ihe na-amasị ha. Nke a abụghị naanị nsogbu maka Tantra, ụmụ nwoke nwere ike ịmanye ụmụ nwanyị mgbe niile na ndụ ha ịme ememe okpukpe, ma ha nwere onwe ha ma ọ bụ na ha anaghị eme. Ememe ndi di otua na abukwanu oke nke nwanyi ha nwere, dika ndi nwanyi bu nke ha tinyere umu aka, inye ezinulo ya nri, inye ndumodu na ezi okwu nke di ya na ndi di ya nma. Ezigbo nwunye bụ pativrata, kpam kpam nye di na ezinụlọ. Okpukpe nke nọọrọ onwe ya na-emegide ụdị a.
A na-ahụ ụdị ihe ịma aka dị iche iche na Western Tantra nke oge a, nke na-adịghị obere ka ọhụụ ya na omume ndị ọ dabere na ya. Tantfọdụ ụmụ nwanyị tantrikas na India anụla banyere Western Tantra (ya na ntanetị ga-abịa India) ma na-eche ihe ụwa ndị a na-eme. West nwere akụnụba ma dị ike, nyekwa ụfọdụ ụmụ nwanyị tantrikas ọ na - eme ka ha jụọ onwe ha ma ha na - ebi ndụ n'ụzọ ziri ezi. Ndị ọzọ na-atụle itinye echiche nke ndị ọdịda anyanwụ na omume ha. Ndị ọzọ abanyekwara na ebili nke okpukpe Hindu Hindu na-eme ihe ike na India, na-esonye n'òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị okpukpe ma kọwaa Shakta Tantra dị ka ịhụ mba n'anya na ofufe nke nne India.
Hindu Shakta Tantra nọgidere na-abụ ọdịnala okpukpe na-agbanwe agbanwe, nke ụmụ nwanyị rụrụ ọrụ dị mkpa. Ọ bụkwa mpaghara nghọtahie dị ukwuu, yabụ ọ bara uru ịkọwa ọrụ ụmụ nwanyị na otu ha siri gbanwee n'oge. Mgbe ọ nọ na India, omume Shakta tantric (nke a jikọtara ya na ofufe chi dị nsọ) bụ ihe ama ama nke ịbụ ihe ọdịnala, na West, ọ bụ ihe ama ama nke ịbụ onye egwu, na-ejikọkarị akparamagwa, ọmụmụ, gburugburu na nwanyị. Ka mgbanwe ihu igwe na-apụtawanye ìhè, ọkachasị jikọtara ọrịa na ụkọ mmiri nke narị afọ nke iri abụọ na nke iri abụọ na otu, okpukpe ndị nwere ọmịiko karịa okike na nwanyị nwere ike ịnweta ọkwa dị elu.
Foto # 1: Sri Yantra ma ọ bụ Sri Chakra nke ejiri ọla edo mee.
Foto # 2: Kumari Puja na Belur Math na Bengal.
Foto # 3: Omume nke chi nwanyị Adya Kali, ihe oyiyi si Adyapeath, West Bengal, 2018.
Onyonyo # 4: Tantric ụdị Ma Kali, nke nwere ọtụtụ isi, nke na-anọchite anya ike na ụwa nke ọ ga - eme ihe.
Onyonyo # 5: Ajụjụ ọnụ nke nwanyị nwanyị okenye, Bakreshwar, West Bengal, 1994.
Foto # 6: Tantric Kali, ya na otutu ogwe aka maka ikike, na-eguzo na Shiva.
Foto # 7: Shakta senti ama ama, Anandamayi Ma. Foto a ma ama.
Onyonyo # 8: Foto Ọgbọ nke Virabhadra Kali, iwepụta oke nwanyị.
"2018 Tribal Tantra Ọnwa iri Ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ na Bali (Ubud)." Wụnye Skins.com. Nweta site na https://sheddingskins.com/cal/ss/baliubud na 20 May 2020.
Alchemy, Ciela. 2020. Ebe nrụọrụ weebụ Ciela Alchemy. Nweta site na https://www.ciela-alchemy.com/ na 20 May 2020.
Avalon, Arthur (Sir John Woodroffe). Ntughari. 1913/1972. Tantra nke Nnwere Onwe (Mahanirvana Tantra). New York: Akwụkwọ Dover.
Bannerji, SC 1978. Tantra na Bengal. Calcutta: Nava Prakash.
Bhattacharya, Bholanath. 1977. "Akụkụ ụfọdụ nke Esoteric Cult of Consort Ofufe na Bengal: Nkọwa Banyere Ebe Ubi." Folklore: Kwa ọnwa 18 310–24, 359–65, 385–97.
Das, Upendrakumas, ed. 1363/1976. Kularnava Tantra (Mula, Tika o Banganubadsaha). Kolkata: Ndị Nkwusa Nababharat.
DeNapoli, Antoinette E. Forthcoming. "M ga-abụ Shankaracharya maka Ndị Inyom! ': Gender, Agency, yana Ọchịchọ maka Nha anya na okpukpe Hindu." Na Ọnụọgụ nke Agencylọ Ọrụ nwanyị na Buddhism na Hindu, nke Ute Huesken deziri. Oxford: Oxford University Press.
Erickson, Devi Ward. 2020. “Mmekọahụ Bụ Ọgwụ.” Ulo akwukwo nke Tantra. Nweta site na https://www.authentictantra.com/shamanism-for-sexual-healing/. na 20 May 2020.
“Nhazi.” 2020. Ememe Tantra Spirit. Nweta site na https://tantraspiritfestival.com/teachers/ na 20 May 2020.
Iju mmiri, Gavin. 2006. Ahụ Tantric: Isi Nzuzo nke Okpukpe Hindu. London: I. B Taurus.
Hatley, Shaman. 2019. “istersmụnna nwanyị na consorts, Adepts na chi nwanyị: nnochite anya ndị nwanyị na Brahmayāmala. ” Pp. 49–82 n’ime Oha obodo Tantric nke Nina Mirnig, Marion Rastelli, na Vincent Eltschinger dere, na Vienna: Akwụkwọ Ọstrịa Austrian nke Sciences Press.
“Homelọ.” 2020. Tantric Priestess nke anụ ahụ Arts. Nweta site na https://tantricpriestess.com/ na 20 May 2020.
Isidora, Abụọma. 2020. Psalm Isidora: Tantra, Mmekorita Mmekọahụ na Mmekọrịta.. E si na https://psalmisadora.com/welcome/ na 20 May 2020.
Kara. 2016. “Ihe ịrịba ama iri bụ a bụ onye ụkọchukwu dị nsọ nke enwetaghachiri (na ihe ị ga-eme maka ya!), 10 Jenụwarị. Akingchọ Mma: Ihe mkpuchi ahụ dị nsọ. Nweta site na http://wakingbeauty.com/akashic-records/10-signs-you-are-a-reincarnated-sacred-sexual-priestess-and-what-to-do-about-it/ na 20 May 2020.
Karuna, Amara. 2020. Weebụsaịtị njikọ njikọ. Nweta site na https://www.karuna-sacredloving.com/tantra-trainings na 20 May 2020.
“Mụta Tantra Eziokwu.” 2018. Ulo akwukwo nke Tantra. Nweta site na https://www.authentictantra.com/learn-tantra/ na 20 May 2020.
McDaniel, June. 2004. Ndinọ ifuru, Okpokoro Nri: Udiri a na-ahu na-efe chi di na West Bengal. New York: Oxford University Press.
McDaniel, June. 1989. Madness nke Ndị Senti: Okpukpe Ecstatic na Bengal. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Muir, Charles, na Caroline Muir. 2010. Tantra: Nka nke ima ima. Ederede Ekeresimesi. Kahului, HI: Isi Iyi Tantra Publications. E si na http://www.alaalsayid.com/ebooks/Tantra%20the%20art%20of%20conscious%20loving.pdf na 20 June 2020.
"My Education & Ọzụzụ na-ahazi." 2020. Tantric Shaman. Nweta site na https://www.thetantricshaman.com/links na 20 May 2020.
Phillips, Stephanie. 2020. “Obodo Whisperer Bi – Melbourne 2020.” Tantric Mmekọrịta. Nweta site na https://tantricsynergy.com.au/event/body-whisperer-residential-melbourne-2020/ na 20 May 2020.
Pomar, Ranjana. 2020. “Banyere Ranjana.” Ntutu Tantra Shamanic na Ranjana. Nweta site na https://tantrashamanicessence.com/about-ranjana/ na 20 May 2020.
Posada, Jennifer. 2012. “Nkuzi nke Ọnọdụ Mmekọahụ.” Jennifer Posada: Olọ Akwụkwọ Oracle & Obodo: Selfhụnanya nke Onwe, Nghọta, Mmekọahụ. Nweta site na https://www.jenniferposada.com/the-sacredly-sexual-priestess-trainings na 20 May 2020.
School Priestess nke Sofia Sundari dere. 2020. Anatara site na https://priestess-temple.com/ na 20 May 2020.
“Ọzụzụ Onye Nkuzi.” 2020. Antlọ Akwụkwọ Tantric Rose Mystery. Nweta site na https://leyolahantara.com/courses/tantric-rose-mystery-school-priestess-training/ na 20 May 2020.
Rose, Evalena. 2020. "Tantra: Art nke Agwọ Mmekọahụ." Urhụnanya Njem: Tantra nke Obi. Nweta site na https://lovejourneytantra.com/tantra-articles/tantra-the-art-of-sexual-healing/ na 20 May 2020.
Sanders, Marcia. 2020. "5 Urban Priestess, Ether." Schoollọ akwụkwọ nke Shakti.org. Nweta site na https://schoolofshakti.org/5-tantric-goddess-ether-copy/ na 20 May 2020.
Shastra. 2019. “Tantra Ofufe Ọkwa Otu:“ Agwọ Mmekọahụ Mmekọahụ. ” meetup. Nweta site na https://www.meetup.com/Tantra-Community-of-Sensual-Spirits/events/257299420/ na 20 May 2020.
Simone, Mare. 2020. “Tantra maka Womenmụ nwanyị.” Mare Simone: Lovehụnanya na Enyi Enyi. Nweta site na https://www.maresimone.com/services/tantra-for-women/ na 20 May 2020.
Szivak, Charlotte. 2013. “Mmekọahụ Ime Anwansi Alchemy: Ikpughe. Na-emetụ aka. Jikota, ”Disemba 16. Ọkara. Nweta site na https://medium.com/the-divine-o/sex-magic-alchemy-5042d22289c5 na 20 May 2020.
"Tantra dị ka Ihe Na-agwọ Ọrịa." 2020. Na-ahụ n'anya Touch Tantra. Nweta site na https://www.lovingtouchtantra.com/about.html na 20 May 2020.
Oflọ nke Bliss. 2020. Anatara site na https://templeofbliss.com/ na 20 May 2020.
Törzsök, Judit. 2014. “Womenmụ nwanyị n'oge Kākta Tantras: Dtī, Yoginī na Sazụ. ” Pp. 339–67 n’ime Ihe omumu ihe banyere Cracow 16, “Tantric Traditions in Theory and Practice,” nke Marzenna Czerniak na Ewa Dębicka-Borek deziri.
Mbido Venus. 2020. Ustù Na-ebili Venus maka Mgbanwe & Mahadum.Nwetara site na https://www.shamanicbreathwork.org/ na 20 May 2020.
Wicca India: Schoollọ akwụkwọ nke Magick & Occult Sciences. 2020. Nweta site na http://wiccaindia.com/ na 20 May 2020.
Samuel, Geoffrey. 2010. Mbido Yoga na Tantra: Okpukpe Indic na narị afọ nke iri na atọ. Cambridge: Ụlọ ọrụ University Press Cambridge.
Onye ọcha, David Gordon. 2000. Tantra na Omume. Princeton, NJ: Mahadum Princeton University.